कम्युनिष्ट पार्टी भित्र भारतकाे प्रभाव - Charnawati Post
कम्युनिष्ट पार्टी भित्र भारतकाे प्रभाव
बिचार ब्रेकिङ्ग समाचार राजनीति
प्रकाशित मिति: १२ असार २०७७, शुक्रबार १२:२२
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार बर्तमान परिस्थितिमा बहुपक्षीय चुनौतिको बीचमा छ । चिन र ऊत्तर कोरिया बाहेक जानताको बिचमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु त्यति लोकपृय छैनन । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी लोकपृय छ । नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक निर्बाचन प्रणालीबाट सुबिधाजनक बहुमतले कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार संचालन गर्नु आफैमा ठुलो कुरा थियो र हो । २१ वौ शताब्दीमा नेपालले यो बिषय कार्यन्वयन गरिरहेको छ । यति बेर साम्राज्यवादी र बितिय एकाधिकार पुजिबादका बिचारक प्रबर्धक , संचालक यसलाई आदर्श मानेर बैचारिक नेतृत्व गर्नुे शासकहरुलाई नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको जनअनुमोदित सरकार बनेकोमा शुरु देखीनै खुशि थिएन । “निर्वाचन” पुंजीपन्थिहरु प्रजातन्त्रको मुख्य कड़ी ठान्थे ।
आफू भन्दा फरक मत राखने राजनीतिक, बैचारिक शक्तिलाई दमन गर्ने निर्बाचन , प्रजातन्त्र र मानब अधिकारको डण्डा तेर्सायर एकाधिकार पुजिबादको झण्डा ऊठाऊथे । सत्ता,शक्ति,मसल र पैसाको बलमा बिपक्षलाई पराजित घोषणा गरेर प्रजातन्त्रको नाममा एकाधिकार पुंजिबादी बिश्व संचालन गरेको शक्तिहरु नेपालका कम्युनिष्टको प्रगति देखेर तिलमिलाऊनु स्वभाविक थियो । यो ताक़त शुरुदेखि नै कम्युनिस्ट सरकार बिशेष त केपी शर्मा ओलीको बिरोधमा मोर्चा बन्दी गरिरहेको थियो । बैचारिक प्रतिबाद गर्दै थियो ।
अहिले यो ताक़त कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको बिरुध बिभिन्न छद्मनाममा प्रचारात्मक मात्रै होइन भौतिकरुपमा सडकमा ऊत्रिएका छ ।सरकार बनेदेखी बर्तमान सरकारको मुल ध्येय संबिधान कार्यन्वयन , लोकतन्त्र , जनताको जनजीबिका र राष्ट्रिय अखण्डता सुद्दृडीकरण गर्नु हो । राष्ट्रीय अखण्डताको सुद्दृडिकरण गिर्ने पछिल्लो कदम स्वरूप भारतले अतिक्रमित भुमी लिम्पियाधुरा , लिपुलेक , र कालापानि समाबेस गरेर नयॉ नक़्शा पास गरि संबिधान सशोधन मार्फत निशानछाप समेत संशोधन गरेको छ र नेपालको भुमि भारतले छोड़नु पर्ने मााग गरेको छ । । लाम समय देखी भारतले कब्जा गरेको भुमी नेपालको नक्शामा समाबेस हुनुको कारण दक्षिण छिमेकी रिसायको मात्र होईन सैनिक धम्कीसमेत दिन पछि परेको छैन । बिगत झै भारतओलीलाई पार्टी र सरकारबाट हाटाऊन चौतर्फि दबाब श्रृजना गर्दै माइक्रो ब्यबस्थानमा ऊत्रेको छ । आन्तरिक र बाह्य दुबै ढगले भारत परिचालित देखिन्छ ।
बिश्वब्यापी रुपमा कोभिड१९ शताब्दीकै खत्रनाक महामारिको रुप संक्रमण फैलिरहेकोछ । नेपालमा पनि संक्रमणले भयाभह रुपमा लिदैछ । अर्थतन्त्र , जनजीबिका र बिकासमा क्रमस नकारात्मक सुचॉक देखिदै छ । संक्रमणको स्थिती यथाबत रहे मुलुको भोकमरि र गरिबको चक्रब्युमा फस्ने संकेत देखिदै छ ।अमेरीकाको अनुदानमा संचालन हुने एमसिसी परियोजनालाई बीबादको बिषय बनाई नेपाल र अमेरीका बीचको सम्बन्धमा अप्ठ्यारो श्रृजना हुने अबस्था देखिएकोछ छ। यसमा …. सको दैलो देखो भन्ने ऊखान चरितार्थ गरिदैछ ।
नेपाल चिन कृतिम सिमा बिबाद तब खड गरिन्छ । जब नेपाल भारत सिमाबिबाद , सन्धिको पुनराबलोकन र डुवानको बिषय ऊठछ तब नेपाल चिन सिमाबिबाद तन्किन्छ । चिनलाई बिबादमा तान्निछ । यसपटक त यो संसदमा पनि प्रबेस गराऊने प्रयत्न भएको छ । नेपाल चिन सिमाबिबाद भारतिय अतिक्रमणको मुद्दा ओझेल पार्न नियतले गरिएको षडयन्त्र मात्र हो नेपाल चिन सम्बन्ध बिगार्न प्रपन्च हो । यसमा सरकारले आफ्नो दृष्टीकोण प्रष्ट पारेको छ । यदि समस्या भए दुईपक्ष बार्ताद्वार हल हुने कुर चिन नेपाल सहमत नै छन । पार्टी र सरकारमाथिको चौतर्फि घेराबन्दीबाट मुक्त गर्ने पार्टी सरकार र जनताहरु एकता बद्धहुनु आजको कार्यभार हो । पार्टी र सरकारको दायित्व हो ।
लामो प्रतिक्षा पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थाई कमिटीको बैठक बसिरहेको छ । बैठकको एजेण्डा सार्वजनिक नहुदै दुई अध्यक्षता बिचका बिबाद , बरिष्ट नेता माधब कुमार नेपाल र ऊहॉको समुहबद्धता र असुन्तिष्टी बाहिरीयको छ। झन फाईटी टु फिनिस हुनेगरी लड़ने जस्ता कुरा बाहरीनु बास्त्बिक रुपमा दुर्भाग्य हो । पार्टी एकता , कम्युनिस्ट आन्दोलन र जनता प्रति धोक हो । यो एकता प्रति ग़द्दारी हुनेछ । अहिले नेकपा भीत्र देखिएको पार्टी भितरको शक्ति संघर्ष , गुटबन्दी, आग्रह, अधैर्यताले पार्टी बिसर्जन हुनेछ । पार्टी एकताको बेलामा गरिएको सहमतिय राजनितीको अन्तहुनको साथै पार्टी बिघटन हुनेछ । पार्टी बैठकमा जादा ओलीको असफलता देखाऊन , पार्टीको पद र सरकारबाट ओली हटाऊँने मोर्चाबंदी गरि जाने हो भने यो कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक हुनसकदैन यसो हुदा बुद्धि ,तर्क ,बहस र जनबादको कुनै अस्तित्व हुदैन । मोर्चा र गुटको अपवित्र गठबन्धन मात्र हुनेछ ।
यसो गरिरहदा एकछ्न न्यानो त होला तर नतीजा कसैको हातमा रहने छैन । बिधी र प्रकृयाको कुरा सोजो मनले ऊठएपनि परिणाम जुन ताक़त र शक्तिले कम्युनिस्ट पार्टी बिघटन गराऊन ,फुटाऊन र सरकार ढालने बिभाजन कोरन ब्यक्ति फेर्ने षड्यन्त्र गर्दै छ । कतै तेही शक्तिको अभीष्ट पुरा गर्न हामि ऊद्दत त छैना? नेतृत्वले यतिकुरा न बुंझेको होला भन्न सकदिन । बुझेको भए किन यतिसारो बैठक बाहिर गुटबन्दि र मोर्चा बन्दी गरिन्छ । पार्टी नेतृत्वों किन सबै बुद्दि बिबेकलाई दाऊमा राखि ओली बिरुध ऊनलांई असफल देखाऊन बाह्य शक्तिको एजेण्डा लाई सहयोग पुगन् गरि बैठकमा प्रबेश नगर्दै अतिरन्जित ढंगले प्रचार गरिन्छ । त्यसैमा केन्द्रित भएर छलफल चलाईन्छ । प्रतिकृयाबादी लाई खुशिपारिन्छ । कसलाई थाहा छैन भारतिय शासक गुट ओलीलाई पार्टी र सरकार दुबैबाट हटाऊन चहान्छ । ऊसका दुत बिभिन्न आबरणमा नेपालमा सकृय छन । हो आज भारत कम्युनिस्ट पार्टी लाई कमजोर बनाऊन रओली हटाऊँ आन्दोलनमा नेपालको हरेक ठाऊमा छ क्रियशिल छ । भारत ओली बिरुध लागनु आधरभुत र तत्कालीन दुबै कारण मज़बूत छन । यसबारेमा नेपाल् राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने सबैले बुझेको कुरा हो ।यो बिषय घाम जस्तै हुदाहुदै किन हाम्रो नेतृत्व अहिले बसिरहेको स्थाई कमिटीको बैठकबाट सरकारको असफलता देखाऊने सके दुबै पदबाट हटाऊन नसके एकपदबाट हाटाउन् क़सम खादै बैठकमा छलंफल गरिदैछ । यसो गर्नमा बाह्य शकित् र पार्टी भित्रका गुट र ऊपगुट एकै चोटी परिचालित भएको अनुभूत हुनु दुखद संयोग हो ।
आसाछ आसन्न बैठकले सबै शंका आशंकालाई खारेज गर्दै पार्टी एकताको बॉकि काम समयमा नै सम्मपन्न गरि पार्टीको सबैअगंलाई चलायमान बनाऊने अठोट गर्नेछ । सरकारका राम्रा कामको रक्षागर्दै पार्टी र सरकारकाै बिच सुमधुर सम्बन्ध क़ायम भई आऊदा दिनमा आऊन सकने सबैखाले चुनौती सामना गर्न पार्टी र सरकार सफल हुनेछ । सुद्दृडै पार्टी , सुद्दड सरकार, समावेशी सामाजिक न्याय सहित समाजवादी समाज निर्माण गर्न यो बैठक सफल होस । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिग्रह हुन्छ नेताहरु बिभाजित गर्न गोटी चाल्नेहरु पराजित गराऊन यो बैठक कोशे ढुगां साबित होस पार्टी कार्यकर्ता र नेपाली जनताको चहान पुराहोस। सारा प्रतिकृयाबादीलाई सधैको लागी पराजित गर्न सकोस ।